‘म मेस्सी हुँ’ भनेर २३ महिलासंग सम्बन्ध राखेको आरोप, को हुन् यिनी ? – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/‘म मेस्सी हुँ’ भनेर २३ महिलासंग सम्बन्ध राखेको आरोप, को हुन् यिनी ?
उनले मेस्सी हुँ भन्दै २३ महिलासँग ढाँटेर शा रि रीक सम्बन्ध बनाएको समाचारहरु आए। तर इरानी प्रहरीले छानबिन गर्दैजाँदा त्यो समाचारहरु झुठो भएको पत्ता लाग्यो। रेजा पारास्तेसले पनि आफूले कहिल्यै महिलाहरुलाई नढाटेको स्पष्टीकरण दिएका थिए। मार्का